Dhammaan ciyaaraha Kubadda Cagta ee Yurub oo la hakiyay - NorSom News
Dhammaan ciyaaraha Kubadda Cagta ee Yurub oo la hakiyay
Dhammaan tartamada Kubadda Cagta ee dalalka Igiriiska, Spain iyo qeybo ka mid ah Qaaradda Yurub ayaa la hakiyay, sababo la xiriira cabsida Caabuqa Corona ee fidaya.
Tarmada ugu caansan ee hakadka la galiyay waxaa ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League-ga, kaasoo balaayiin qof ay ka daawadaan caalamka daafihiisa kala duwan.
Sidoo kale waxaa la wada baajiyay kulamadii tartamada EFL-ka, FA-da Haweenka iyo sidoo kale Championship-ka Haweenka ee dalka Ingiriiska.
Marka ugu horreysa ee ay suurtagalka tahay in ciyaarahan qaarkood dib loo billaabo waa 3-da bisha April.
Mas’uuliyiinta horyaalka Premier League-ga ayaa sheegay in tartankaas dib loo ambaqaadi doono 4-ta bisha April, iyagoo sababta loo hakiyayna ku micneeyay “talo caafimaad iyo xaaladda hadda taagan sida ay tahay”.
Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska ayaa sidoo kale sheegay in dib loo dhigay kulamo ay xulka qaranka England dabayaaqada bishan la ciyaari lahaayeen dalalka Talyaaniga iyo Denmar.
Mas’uuliyiinta Tartanka EFL, oo billaaban doona 3-da April, hal maalin ka hor marka uu billaabanayo Premier League-ga, ayaa sheegay in kooxaha lagula taliyay inay iska joojiyaan “Howlaha aan aasaasiga ahayn”, sida: “soo muuqashada ciyaartoyda, booqashada garoomada tababarka iyo kulamada taageerayaasha”.
Previous articleNorway: Qofkii ka imaada wadamada ka baxsan Nordica, waxaa lagu sameyn karantiilis!
Next articleAvinor: 9 garoon diyaaradeed ayaan xireynaa.